Lahatsoratra Facebook miteraka fisamborana any Bangladesh, mampiahiahy ny mpiserasera · Global Voices teny Malagasy
Lahatsoratra Facebook miteraka fisamborana any Bangladesh, mampiahiahy ny mpiserasera
Karazam-pitenenana an-tserasera maro no helohin'ny lalànan'ny fiarovana nomerika
Voadika ny 22 Mey 2019 5:12 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Ελληνικά, Español, Swahili, English
Ny poeta Henry Swapon sy ny mpisolo vava Imtiaz Mahmood. Sary natambatra nozaraina tao amin'ny media sosialy.
Olona roa no voasambotra tamin'ny 14 sy 15 Mey noho ny fanehoan-kevitra nalefa tao amin'ny Facebook. Niteraka hatezerana sy ahiahy tao amin'ny fampitam-baovao sosialy ny fisamborana.
Ny fisamborana ilay poeta Henry Swapon
Nosamborina tao an-tranony tao Barishal,any Atsimo afovoan'i Bangladesh ilay poeta sady mpanao gazety Henry Swapon ny 14 may. Voampanga ho nanitsakitsaka ny lalàna mifehy ny Fiarovana nomerika ao Bangladesh izy.
Efa nenjehina teo aloha niaraka tamin'ireo rahalahiny roa, Alfred and Jewel Sarkar i Swapon, mpikambana ao amin'ny fiarahamonina kely kristiana eo an-toerana, noho ny “fandratrana ny fihetseham-po ara-pivavahana eo amin'ny kristiana sy ny silamo” tao amin'ny media sosialy.
Nosamborina araka ny lalàna mifehy ny fiarovana nomerika ilay poeta sady mpamoaka lahatsoratra Bangladeshita, Henry Swapan! #freethepoet #bangladesh #bangladeshiblogger #FreedomOfSpeech pic.twitter.com/MGoCec2nsR
Araka ny filazan'ny Dhaka Tribune, namoaka lahatsoratra iray tao amin'ny Facebook nitsikera an'i Lawrence Subrata Howlader, evekan'ny diosezy katolika any Barishal i Swapon. Nisafidy hanatontosa fandaharan'asa ara-kolotsaina tao amin'ny fiangonana katolika eo an-toerana ilay eveka ny 22 Aprily 2019, ampitson'ny fanafihan'ny mpampihorohoro tany Sri Lanka. Nihevitra i Swapon fa tokony nanemotra ny fety ilay eveka ho fanajàna ireo olona aman-jatony izay maty nandritra ny fanafihana.
Tsy faly tamin'ny feo namelezany an'ilay eveka ireo Kristianina hafa ary nandefa fandrahoanana ho faty ho azy mihitsy aza ny sasany. Miloa-bava hatrany ao amin'ny media sosialy i Swapon mba hanohitra ny tsy rariny sy ny kolikoly rehetra ao an-tanànany.
Nanoratra tao amin'ny Facebook ny mpisera Swakrito Noman:
Ao Bangladesh, ampihimamban'ny fondamantalista Miozolomana ny tetikady fanafihana mpikatroka amin'ny filazana fa “mandratra ny fihetseham-po ara-pivavahana”. Hitantsika ankehitriny fa ao anatin'izany koa ny kristianina mpandala ny fomban-drazana. Mino aho fa marary saina ireo izay mihevitra tahaka izany tamin'ny fandrenesana ny tsikera. Mila mandrindra ny fitsaboana ireo olona marary saina ireo ny fanjakana. Manameloka mafy ny fisamborana ilay poeta Henry Swapon izahay ary mitaky ny famoahana azy tsy misy fepetra.
Ny fiasamborana ilay mpisolo vava Imtiaz Mahmood
Ny marainan'ny 15 May, nosamborin'ny polisy ilay mpisolovava ao amin'ny Fitsarana Tampony sady mpanoratra, Imtiaz Mahmud, noho ny raharaha fitoriana tamin'ny taona 2017 araka ny lalànan'ny teknolojian'ny fampitam-baovao sy ny fifandraisana izay efa tsy misy intsony amin'izao fotoana izao, nilaza ilay olom-pirenena tsotra, Shafiqul Islam tamin'izany fa nanimba ny fihetseham-po ara-pivavahana ny lahatsoratra nalefan'i Mahmood tao amin'ny Facebook ary nitarika herisetra ara-piarahamonina tao amin'ny faritra Chittagong, any atsimo atsinanan'i Bangladesh.
Nahazo fahafahana vonjimaika i Imtiaz Mahmood tamin'ny nitondrana ny raharaha tany am-boalohany, saingy namoaka didy fampisamborana hafa ho azy ny fitsarana Khagrachhari tamin'ny volana Janoary 2019.
Naneho hevitra momba ny fihenjanana ara-poko izay nipoaka taorian'ny famonoana ilay mpitondra moto Bengali tany Khagrachhari i Mahmood, izay nahatonga ny vondrona Bengali handoro trano maro sy fivarotan'ny mponina Indizeny ao amin'ny faritr'i Rangamati any Chittagong. Nilaza tamin'ny Dhaka Tribune ireo loharanom-baovao eo an-toerana fa tsy nandray fepetra ny polisy mba hifehezana ny toe-draharaha.
Fitoriana an-jatony toy izany no napetraka nanomboka tamin'ny taona 2013 ka hatramin'ny taona 2018, rehefa nosoloina ny Lalànan'ny Fiarovana Nomerika ny Lalànan'ny Teknolojiam-baovao sy ny fifandraisana.
Famoretana ny media sosialy ao Bangladesh. Nanao fisamborana faharoa tao anatin'ny iray andro ny polisy noho ilay lalànan'ny fiarovana nomerika. Voasambotra ny alarobia maraina ilay mpanoratra Imtiaz Mahmood noho ny raharaha mikasika ny teknolojiam-baovao sy ny fifandraisana #Freedomofexpression #ICTLawhttps://t.co/eH8H38unCr
Nanoratra tao amin'ny Facebook ilay mpanoratra Meher Afroz Shaon:
Tiany ny tendrombohitra sy ny mponina eo aminy. Manoratra momba ny zony izy. Tsy mbola nahita “teny mandratra” tamin'ny asa sorany aho.
Misy zavatra tsy araka ny tokony ho izy… zavatra araka ny tokony ho izy mihitsy. Manantena aho fa hilamina tsy hoe ela ny tsy mety rehetra.
PS: Nahita lahatsoratra maro tao amin'ny Facebook aho izay misy teny mahery sy faniratsirana. Raha misy mitory azy ireo ny olona, hisy didim-pisaborana omena azy ireo avy hatrany ve?
Mpiserasera maro no nanameloka ireo fisamborana roa ireo, ary ny sasany nangataka ny hanafoanana ny lalàna. Nisioka ilay mpila ravinahitra, Bangladeshita, Leesa Gazi hoe:
Tena mahamenatra tanteraka.
Tsy afaka miantoka ny filaminam-bahoaka ny governemanta, fa mailaka ny hisambotra olona eo ambanin'ny lalàna manafay momba ny fiarovana nomerika, izay manohitra ny tena voalazan'ny lalàmpanorenan'i Bangladesh. https://t.co/1sFKY10OPV
__Leesa Gazi (@LeesaGazi) 15 may, 2019
Nanoratra tao amin'ny Facebook ilay mpanao gazety Probhash Amin:
Taorian'ilay poeta Henry Swapon, nosamborina koa ny mpisolovava Imtiaz Mahmood. Voafetra tsikelikely ny fahalalahana maneho hevitra. Maniry ny fanafoanana ny lalàna henjana rehetra aho. Mila fahafahana maneho hevitra aho. Mila ny famotsorana avy hatrany an'i Henry Swapon sy Imtiaz Mahmood aho.
Nankatoavin‘ny parlemanta Bangladeshita ny lalànan'ny fiarovana nomerika tamin'ny 28 septambra 2018 na dia teo aza ny ahiahy momba ny fiantraikany ho an'ny fahalalahana maneho hevitra. Nanolo ny lalàna malaza momba ny fampitam-baovao sy ny teknologia, izay nampiasana ho fitaovana hanampenam-bava izay lahateny mitsikera an-tserasera ihany koa izany lalàna izany.
Manasazy ny karazana lahateny antserasera ny lalàna, izay manomboka amin'ny hafatra manala baraka hatramin'ny lahateny “manevateva ny soatoavina na ny fihetseham-po ara-pivavahana”, ary mampiditra lamandy goavana. Ahitana fampidirina am-ponja maharitra ela koa ny lalàna noho ny fampiasana aterineto mba hananganana korontana eo amin'ny vahoaka sy noho ny “fanangonana, fandefasana na fitehirizana” ireo dosien'ny governemanta efa nampirimina amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana nomerika. Nanambara ny filankevitry ny Tonian-dahatsoratra ao Bangladesh fa ” mifanohitra amin'ny fahalalahana voaaron'ny lalampanorenana, ny fahalalahan'ny fampitam-baovao sy ny fahalalahana miteny” ilay lalàna.
Vakio bebe kokoa: Free speech advocates say Bangladesh's new Digital Security Act is ‘ripe for abuse’
Manome fahefana feno ho an'ireo sampan-draharahan'ny fampiharana ny lalàna ihany koa ny lalàna mba hanokatra fanadihadihana ho an'ireo olona izay heverina fa mampidi-doza na mandrahona.